Ka Qaybgalka Suuqgeynta: Madadaalo Fiidiyowyo | Martech Zone
Dhisida barxad loogu talagalay ganacsiyada inay wax ku qoraan waa guul uun haddii macaamiishaas ay si dhab ah uga faa'iideystaan ​​barxadda. Waan ognahay in macaamiisheennu ay ku guuleysan doonaan helitaanka maalgashiga haddii aan ka heli karno iyaga inay abuuraan oo ay wadaagaan qoraallo badan oo ku saabsan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda.
Isticmaalka Platform wuxuu u baahan yahay in softiweerku shirkad adeeg ahaan dhab ahaantii leeyahay istiraatiijiyad lagu hubinayo ka faa'iideysiga. Laga soo bilaabo markabka iyada oo loo marayo isticmaalka kormeerka, barxad waa in la hubiyaa si loo hubiyo inaad si buuxda uga faa'iideysanayso barxadda. Way fududahay isticmaalkeedu leads wuxuu keenaa natiijooyin, natiijooyinku waxay keenaan dib u soo laabasho maalgashi, iyo soo noqoshada maalgashiga waxay keenaysaa cusboonaysiinta macaamiisha iyo ballaadhinta.
Markii aan aragnay qashin ka faa'iideysigayaga, waxaan helnay hal-abuur si aan ula nimaadno olole emayl ah oo ku soo daray fiidiyoowyo liita oo si xun loo soo saaray si loo qabsado dareenka macaamiisheena.
Haddii aad ka tagaysid is-hoos-u-dhiggaaga albaabka, waxaad sidoo kale ku dhejin kartaa arrintaas. Waxaan u sameynay xoogaa ololeyaal ah dib-u-hawlgal degdeg ah oo loogu talagalay macaamiisha wax soo saarkoodu ka maqnaa.
Waxaan la soo baxnay dhammaan joogsiyada oo waxaan ku raaxeysanay fiidiyowyo macaamiishayada ah. Waxaa lagu duubay iyaga oo isticmaalaya iPhone, iMovie, iyo raadadka maqalka ee caadiga ah. Dhamaantood maalin ayaan soo saarnay waanan ka saarnay!
Fiidiyow Suuq Ku Farxad Leh: Fadlan Soo Dhig!
Hal usbuuc ka dib, natiijooyinku waxay u fiicnaayeen inta badan macaamiisheenna, sidaa darteed waxaan u dhignay emayl maanta si aan ugu mahadnaqno.
Fiidiyow Suuq-geyn Xiiso Leh: Waad Dhejisay, Doug Waa La Badbaadiyey!
Dabcan, macaamiisheenna aan kor u qaadin saxanka waxay heleen farriin kale.
Fiidiyow Suuq-Faneed Xiiso Leh: Ma Dhigin, Doug Lama Badbaadin!
Shaacinta: Waxaan ahay saamilay iyo aasaasiye Compendium Blogware.
Tags: hubkaaisugeyniphonedhiirogelinsaashawlgelinta fiidiyowgasafar videovideos
Appirio wuxuu isku xiraa Salesforce iyo Facebook
Feb 3, 2009 markay ahayd 6:45 PM
Feb 3, 2009 markay ahayd 6:49 PM
Aniguna waan ka cudurdaaranayaa xiritaanka :), waxaan ka mid ahay kuwa loogu talo galay inay wax u qoraan Sigma Micro's Ecommerce Gurus - Blog-ga Compendium oo si xishood leh aan weli loo helin !.
Feb 3, 2009 markay ahayd 8:49 PM
Maxay qaadaneysaa si aad uga soo saarto boostooyinka qaar? Waxaan ula jeedaa si daacad ah - waan jeclaan lahaa ra'yigaaga!